မလေးရှားဂျက်လေယာဉ်အဘို့အရှာဖွေရေးအတွက်တပ်ဖြန့်ခြောက်ယောက်ကိုအိန္ဒိယသင်္ဘောများ - သတင်း Rule
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်သောကြာနေ့ကနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားသောပျောက်ဆုံးနေတဲ့မလေးရှားဂျက်လေယာဉ်အဘို့အကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်ရှာဖွေတပ်ဖြန့်သင်္ဘောများနှင့်လေယာဉ်အရေအတွက်ကိုနီးပါးနှစ်ဆတက်ပြောပါတယ် 239 ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်လူတွေ.
အိန္ဒိယရေတပ်သည်ခြောက်သင်္ဘောများနှင့်ငါးလေယာဉ်ယခုကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်အတွင်းပျောက်ကွယ်လေယာဉ်မဆိုနိမိတ်လက္ခဏာ scouring ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်, သောနိုင်ငံ၏အရှေ့တောင်ဘက်မှဝေးအိပ်ကြောင်းကျွန်းများ၏အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝေးလံခေါင်သီကပ္ပလီနှင့် Nicobar အုပ်စုဝန်းရံ.
“ကျနော်တို့ဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုခငျြနှင့်ကတင်းကြပ်စွာလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်,” အိန္ဒိယရေတပ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် D.K. မစ္စတာရှားမားကအေအက်ဖ်ပီကိုပြောသည်.
အိန္ဒိယမလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းပျံသန်းမှုများအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်သုံးသင်္ဘောများနှင့်သုံးလေယာဉ်တင်အစောပိုငျးကချထားခဲ့ 370 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ်ပျောက်ကွယ်သွားသော.
အိန္ဒိယသင်္ဘောများနှင့်လေယာဉ်ပျံတစ်ဦးဧရိယာထဲမှာရှာဖွေနေခဲ့ကြ “designated” ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဒေသအတွက်မလေးရှားရေတပ်အားဖြင့်, မစ္စတာရှားမားကပြောသည်.
အဆိုပါမလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်, ဘေဂျင်းကွာလာလမ်ပူကနေလမ်းကြောင်း en စနေနေ့ကအဆက်အသွယ်ပြတ်သော, သင်္ဘောငါးအိန္ဒိယခရီးသည်ခဲ့.
မလေးရှားအာဏာပိုင်များသူတို့သိသိသာသာသူတို့ရဲ့ဒါ-ဝေး fruitless ရှာဖွေရေး၏ပြီးသားကျယ်ပြန့်နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ခဲ့ကြသောကြာနေ့ကပြောပါတယ်ခဲ့, တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့်အရှေ့သို့ထပ်မံအနောက်ဘက်ကိုဦးတည်.
အိန္ဒိယရေတပ်အာဏာပိုင်များတည်နေရာကိုဘင်္ဂလားမုသာဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာရှာဖွေခံရဖို့ကကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည် 900 ကီလိုမီတာ (560 မိုင်) Port Blair ၏အနောက်ဘက်, ကပ္ပလီနှင့် Nicobar ၏မြို့တော်.
← Intel က 1.6Tbps ကတိပေးထားသည့် optical cable ကိုတီထွင် RIAA Google က '' မူပိုင်ခွင့်ကိုတိုက်ဖို့ပိုလုပ်ဖို့လိုလား’ →